श्रीमान विदेशमा श्री’मती नेपालमा ग’र्भवती ! अन्तिममा यसरी खु’ल्यो पो’ल ! « गोर्खाली खबर डटकम
श्रीमान विदेशमा श्री’मती नेपालमा ग’र्भवती ! अन्तिममा यसरी खु’ल्यो पो’ल !
कैलालीको लम्कीमा श्रीमान विदेश गएको एक वर्ष पछि घरमा श्रीमती ग’र्भवती भएको रहस्य खु’लेको हो।,भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने भनाईलाई कैलालीका एक यु’वाले मिथ्या सावित गरेका छन्। आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजुलाई ग’र्भवती बनाएर ती युवाले यस्तो ह’र्कत देखाएका हुन्। प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भा’उजुलाई ग’र्भवती बनाएका हुन्।
दाजु विदेश गएको मौका पारी भा’उजुसँग स’ल्किएका ती देबरले एक छोरीकी आमालाई ग’र्भवती बनाएका हुन्। श्रीमान विदेश गएको एक वर्ष पछि ती महिला ग’र्भवती भ’एकी थिइन्। ग’र्भवती भएकी ती महिलाले ला’जै पचाएर ससुरालाई पे’ट सु’नियो भनी झु’ट्टो बोलेर उपचारको बा’हनामा अस्पताल गएपछि ग’र्भवती भएको र’हस्य खुलेको हो। उनका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा मलेशीया छन्।
श्रीमान् न’भएको मौ’कामा ती महिलाले कान्छा ससुराका कान्छा छोरा देवरसँग ल’सपस गरेकी थिइन्। महिलाले देवकोटाकै ग’र्भ रहेको स्वीकार गरेपछि ससुराले बु’हारीलाई घरमा नराख्ने बताएका छन्। ती महिलाले देवरलाई घरमै बोलाएर यौ-न स’म्बन्ध रा’ख्ने गरेको पनि स्वीकार गरेकी छिन । यौ’न स’म्र्पक गर्ने देवर भने भारतमा रोजगारी गर्दै आएका छन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार देवरले आफुलाई भाउजुले ज’वरजस्ती यौ-न स’म्पर्क गर्न लगाएको बताएका छन्। ‘केटीएमनेपालबाट साभार
चीनले ओलम्पिकमा आउने खेलाडी र प्रतिनिधिहरुको लागि अनिवार्य रुपमा MY2022 एप अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गर्न भन्यो l यस एपको माध्यमले चीनले जासुसी गरेको आरोप
मर्स्याङ्दी पुंन थुनियो तटिय क्षेत्रका संरचना जोखिममा